ISBIKE Codsi Mobile RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulApplicationSBİKE Dib u Cusbooneysiinta Arjiga Codsiga
11 / 12 / 2019 34 Istanbul, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Gobolka Marmara, TURKEY
ApplicationSBİKE Codsiga Mobilada Waxaa la cusbooneysiiyay: İSPARK, oo ah shirkad ku taal degmada Istambul ee Magaaladda Istanbul, ayaa dib u cusbooneysiisay codsiga mobilada ee İSBİKE, kaasoo ah mashruuc maalin kasta socda. Hadda way fududahay in baaskiil looga kireeyo Istanbul tiknoolojiyada mobilada. Wadooyinka baaskiilka ee Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Iimaan (IMM) ee magaalada oo dhan ayaa horumariyay sumadda ISBIKE iyo isticmaalka baaskiilka smart. Iyada oo mashruuca, oo muwaadiniinta siisa fursad ay ku ciyaaraan isboorti, ayaa shabakad gaadiid oo beddelaad ah laga sameeyay magaalada oo dhan.
İSPARK, oo ah shirkad hoos timaada İBB, ayaa cusbooneysiisay İSBİKE codsi wareega ee loogu talagalay kuwa jecel baaskiil. Muwaadiniinta, wejiga cusboonaysiinta iyo sahlan in loo isticmaalo dukaamada mobilada ayaa soo dejisan kara dalabka "baaskiil smart" awood u yeelan doona inuu kireeyo.
Si sahlan u raadso badhanka
Dadka daggan Magaalada Istanbul ama dalxiisayaasha ah ayaa arki kara rugaha baaskiilka smart smart ugu dhow oo leh muuqaalka duulista ee barnaamijka mobilada ISBIKE ee ay ku soo dejinayaan taleefannadooda smart. Waxay la socon karaan imisa kiilomitir oo ay ka sameeyaan baaskiiladaha smart ee ay kireystaan ​​waqti gaaban, xaddiga adeegsigooda iyo gaar ahaan howlahooda caafimaad.
Maareeyaha guud ee shirkadda İSPARK Murat Çakır ayaa sheegay inay sii wadi doonaan fidinta mashruuca baaskiil ee caqliga leh ee lagu marayo wadooyinka baaskiilka, jardiinooyinka magaalada iyo meelaha ku habboon marka loo eego dhanka dhulka wuxuuna yidhi: Waxay awoodi doonaan inay si fudud u gaaraan baaskiiladaha caqliga leh. Waxaan kordhin doonaa tirada baaskiillada waqti gaaban ”.
Soodejiso barnaamijka taleefanka gacanta, booqo Istanbul
Codsiga mobilada ee İSBİKE waxaa lagu cusbooneysiiyay xulashooyin adeegsi oo kala duwan waxaana laga soo dejisan karaa dukaamada taleefanka bilaashka ah. Muwaadiniinta ka kireysan kara baaskiiladahooda İSBİKE codsi wareega taleefanka 144 soo aruuriyay oo ku yaal dhinacyada Anatolian iyo Yurub ee İSPARK; Florya ilaa Yeşilköy, Karaköy ilaa Sarıyer, baaskiil Bostancı ilaa Kartal.
Intaa waxaa dheer, wadada degmada Zeytinburnu, Esenler iyo Ümraniye folks waxay awoodaan inay ka kireeyaan baaskiiladaha caqliga leh beerta qaranka oo ay u dhigayaan nolol caafimaad qabta.
MapSBİKE Khariidadda Codsiga Baaskiilka Mobilada
TCDD ayaa soo bandhigaysa Codsi Mobile oo loogu talagalay Android
Codsiga Gaadiidka Gurmadka Kahramankart
Fikradaha ego Award Turkey Aqbaarta Service ka Association of Mobile
Codsiga HGS Mobile waa PTT Online
Codsiga Codsiga Taleefanka Smart City
Gaadiidka ayaa ka sahlan codsiyada cusboonaysiinta ee Metro Istanbul Mobile Application
Kumanaan 481 ayaa adeegsaday ISBIKE sanad gudihiis
TÜVASAŞ Shahaadada Tayada Cusub
TÜLOMSAŞ waxay cusbooneysiisay tareenka Gaziantep ee Eskisehir
HATSU waxay cusboonaysiisay weelka xidhitaanka asfaltka
Road Wrist-Reed Waddada loo isticmaalo 30 Village ee Gaziantep
Alipinar Bridge ayaa ka gudubtay tareen
Saunas mobile-ka ah oo laga sameeyay qadiimiyadii hore ee telefishinka
Codsiga mobile ee ISBİKE
ApplicationSBİKE Codsiga Mobiilka